China otomatiki nyoro pukuta kugadzira muchina kugadzirwa tambo yezvidimbu 1 kurongedza fekitori uye vagadziri | Yidao
Maitiro ekuita uye hunhu hwemidziyo.
1. zvigadzirwa zvekugadzira zvinodiwa: Iyo michina inogona kuburitsa dzakasiyana spunlace; jira remhepo inopisa; bepa risina guruva nezvimwe zvigadzirwa.
2. Iyo inoshanda musimboti yemidziyo: kuendesa → otomatiki longitudinal kupeta → mbishi yekucheka → yakatwasuka kupeta → kurongedza → huwandu hwemvura yekuzadza → kudhinda zuva → kusona → kucheka otomatiki kupera.
3. Midziyo iyi inokodzera kuputira zvinyoro nyoro muaviation, muzvitoro, zvekurapa, zvekudya, zvekushanya, nemamwe maindasitiri.
4.Iye michina yakagadzirirwa akawanda-anoshanda marefu-masere-peta mashandiro uye inofamba nzira yekupeta ine inochinja cam, iyo inogona kupeta zvakanaka.
5. zvishandiso zvakaverengerwa neuwandu otomatiki emvura yekuzadza mudziyo, huwandu hwemvura hunogona kudzorwa zvakasununguka zvinoenderana nezvinodiwa, chaiyo mvura yekuzadza chinzvimbo.
6 midziyo yakatwasuka uye yakatwasuka chisimbiso neyakavanzika PID tembiricha yekudzora system kutonga, kusona chisimbiso kuita kwakanaka uye isina mvura. Uye yakarongedzwa neingi vhiri otomatiki date kudhinda chishandiso, dijitari kudhinda kwakajeka. 7.
7 Iyo michina inotora inverter yekunze inosanganisirwa ne PLC programmacontrol controller uye microcomputer kuratidza kudzora kugadzirwa, iyo parameter yekugadzira yakajeka pane tariso, nyore kushanda. 8 Iyo midziyo goko uye zvigadzirwa zvinobatanidzwa zvinodzorwa nePID tembiricha yekudzora sisitimu.
(8) Midziyo goko uye zvikamu zvine chekuita nechigadzirwa zvese zvakagadzirwa nesimbi isingaite 304.
(9) Yepamberi dhizaini dhizaini, compact dhizaini, inomhanyisa kumhanya, kugadzikana kwakanaka, kugadzirwa kwakanyanya kushanda, zvinoenderana nezvinodiwa zvehutano hwenyika. 10.
10. furemu rese rinotora iyo yenyika yakaumbwa simbi, platinamu yakanamirwa kurapwa, kwakakurudzira kurapwa, furemu kutapira saizi kunyatso, bhandi pulley uye zvese zvikamu zvekutapurirana, dhigirii repakati rakarurama, chikuru giya chidimbu kugadzira, nyore kugadzirisa gap, chengetedza kushanda kwakanaka kwemuchina, iyo huru accessories garandi yegore rimwe (kunze kwezvikonzero zvevanhu), kwehupenyu hwese kugadzirisa.
11 standard screws ese anoshandisa nyika standard yepamusoro 45 # simbi uye simbi isina tsvina hexagon socket screws, iro rose goko uye zvikamu zvinobatanidzwa muchigadzirwa zvese zvakagadzirwa ne304 simbi isina simbi. All electroplated zvikamu mumatanda maviri, kupera kwakanaka, kuve nechokwadi chekuti mativi ese emuchina apedza, ngura kuramba.
12、Ini ndinodyara kwenguva-refu technical technical yekushandisa.
II. Tekinoroji paramende
Simba rekugadzira 35-200 bhegi / min (zvinoenderana nesaizi uye chinhu chemvura inopukuta)
Kurongedza saizi (mutengi chinodiwa) Max: 200 * 100 * 35 min: 65 * 30
Magetsi 220v 50hz 2.4kw
Kunopindirana divi 2100 * 900 * 1500
Liquid inowedzera huwandu 0ml-10ml
Kurongedza zvinhu Rakaumbwa firimu, aluminnium yakanamirwa pamifananidzo firimu
Upamhi hwemufirimu 80-260mm zvichienderana nekureba kwekutakura
Uremu hwese 730kg
Max. Kurongedza yakazara dhayamita Wet tishu firimu mupumburu 1000mm Wakaumbwa firimu: 300mm
Wet pukuta divi Max: 250 * 300mm Min: (60-80) mm * 0.5mm
Pashure: Kofi capsule kurongedza muchina
Zvadaro: Otomatiki nyoro ndokupisika dzaFord
Automatic nyorova ndokupisika kuita muchina
mwana akanyorova anopukuta kugadzira muchina
chidimbu chimwe chete nyoro nyowani kupukuta muchina
nyoro ndokupisika kuita muchina
nyoro pukuta kugadzira muchina mugadziri
Wet Kupukuta Kurongedza Machine
nyoro pukuta yekugadzira mutsara